My name is Khan – Politikan-kolontsaina any India · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Febroary 2010 21:54 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, Français, Nederlands, 繁體中文, 简体中文, Português, Italiano, Español, bahasa Indonesia, English
Sarin'afisy hita ao amin'ny Wikipedia
Tsy miresaka momba ilay sarimihetsika avoakan'i Bollywood hoe ‘My Name is Khan‘ [Khan no anarako], fa miresaka ny fahazoana azy kosa any India sy any Etazonia sy ny anton'izany. Ny topimaso ao amin'ny lahatsoratra iray ao amin'ny bolongana miteny Hindi no ahitana fa misy zavamisy mahaliana ao amin'ity sarimihetsika ity – fa mifandraika bebe kokoa amin'ny kolontsaina [na fahazarana] any India ny adihevitra miompana aminy mihoatra noho ny hakanton'ilay sarimihetsika mihitsy.
Tafa mihitsy ny famoahana ity sarimihetsik'i Shah Rukh Khan mitondra ny lohateny hoe “My Name is Khan” (Khan no anarako) nivoaka vao haingana ity any Etazonia satria mandoko indray ny toe-java-niseho tany amin'ny tany tandrefana taorian'ilay toe-java-niseho nampahonena indray 11 septambra sy miezaka ny mampiseho indray hoe tahaka ny ahoana mihitsy moa ny fijerin'ny Amerikana ny miozolomana tamin'izany fotoana izany. Aingam-panahy avy tamin'ny zava-nihatra tamin’ i Khan tenany tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Newark tamin'ny herintaona izy ity raha voatendry hofotopotorin'ny tompon'andraikitry ny seranana fanindroany izy. Niteraka fitroarana tany India iny toe-javatra iny ka nahatery ny Ambasadera Amerikana US tany New Delhi hamoaka fanambarana fa hisy ny fanadihadiana. Mifanahataka tamina tantarana miozolomana mipetra-drery iray any Etazonia izay nosarangongrangotan'ny polisy taorian'ny 11 septambra ity sarimihetsika ity. Mba hanampiany ny tantaram-piainana nosoratany ihany tamin'ilay sarimihetsika dia nampiany hoe nitia vehivavy Haindò izy. Efa diso fantatra moa fa anatin'ny fiainana andavanandro dia Haindò ny vadin'i Shah Rukh Khan. Noho ny fihasarotan'ny fifandraisana amin'ny tandrefana avy any Eoropa andrefana sy Amerika avaratra mahazo ny mponina miozolomana taorian'ny fanafihan'ny 11 septambra sy ny taorian'izany, dia voaray tsara ilay sarimihetsika tany Etazonia ary nahazoana 1 miliara ropia zon'ny fitsinjarana azy avy amin'ny Fox Studios.
Any India kosa dia nisedrana olana maro ny takariva voalohany namoahana ny sarimihetsika tany Bombay noho ny nataon'ny ankolafy faondamentalista Hindutva avy amin'ny antoko Shiv Sena. Izao no notateriko tao amin'ny bolongako ‘The World Around Me‘ (ny tontolo manodidina ahy) :
Araka izay nosoratako dia nandray fepetram-pisorohana sy arofanina isan-karazany ny fitondrana Maharashtra androany folakandro, ary mpikambana avy amin'ny Shiv Sena 2000 no nosamborina noho ny fikasan'izy ireo hanakorontana ny fijerena ilay sarimihetsika.
Samihafa be ihany koa ny hevitra nivoaka momba ity lohahevitra ity ami'ny bolongana miteny Hindi.
Naneho i Vijay Prakash Singh avy any New Delhi [hi] taorian'ny nijereny ilay sarmihetsika fa toy ny sarimihetsika tsotra mahazatra ihany izy io fa ny nampalaza azy kosa dia ny tontolo mampiady hevitra nivoahan'ilay sarimihetsika. Nolazainy fa manaraka ny fomba fisainana tandrefana i Shah Rukh Khan ary nanao izay hanintonana ny tandrefana any amin'izay mahaliana azy. Araka ny nolazain'i Singh dia niezaka hanao izay anaitairana ilay sarimihetsika ary nampiasaina avokoa ny fomba rehetra ahatongavana amin'izany. Etsy ankilany, tombon-dahiny ho an'ilay sarimihetsika ihany koa ny fisiana antoko mihendanja sahala amin'ny Shiv Sena, izay be fihetsiketsehana tamina lohahevitra tsy misy dikany loatra ary vao maika nampalaza kokoa an'ilay sarimihetsika hipetraka amin'ny laza tsy sahaza ho azy. Ankoatra izay, mahazo ny fanohanana avy amin'ny antoko eo amin'ny fitondrana i Khan, ka nihetsika avy hatrany ny mpitandro ny filaminana hisambotra ny mpanakorontana. Tsy hita akory manko izay nisy ireo polisy ireo, hoy i Singh, raha no tafihan'ireo avy amin'ny Shiv Sena ireo ihany ny Karana tavaratra.
Noho io toe-draharaha io, dia nanao fandaharana hamoahan-kevitra ny BBC Hindi [hi] raha nanontany ny mpamaky azy hoe manohana ny fifampihavanana amin'i Pakistan ve ry zareo sa manana ny rariny amin'izay nataony ny Shiv Sena. Asongadina avy amin'ny valinteny maro ny an'i Jamshed Akhtar avy any Lucknow nilaza fa namitaka hatrany an’ India i Pakistan fa mety kos izay nataon'i Shah Rukh satria mahay milalao izy ka mendrika hotohanana fa tsy jerena kosa ny firenena niaviany. Rajiv avy any Allahabad indray nilaza fa na dia malaza aza ny mpilalao sy ny mpiantsehatra miozolomana miaraka amin'ny Haindò dia mitady laza amin'ny alalan'ny filalaovana azy ho enjehina mandrakariva ny sasany.
Nitish Raj indray ao amin'ny bolongany nanoratra mialoha ny namoahana ny sarimihetsika fa manao izay hahenoana azy ny Shiv Sena satria nihena manko ny lazany ary mihamatanjaka kosa ireo mpifaninana aminy.
Tsara ny mampahatsiahy eto ny lahatsoratr'i Tarun Vijay izay mandranty ny andavanandro sarotra iainan'ny Haindò Kashmirita izay miaritra toy ny manao sesintany ny tenan'izy ireo ao amin'ny fireneny ihany ary tsy afa-milaza akory ny fahorian'izy ireo noho ny fisaratsarahana ara-politika misy ankehitriny. Taranja hafa ho enti-mamaritra ny fiaraha-monina misy any India indray moa izany.
Indonezia 6 andro izay